“လူ့ဘ၀ဆိုတာ ရေးထားပြီးသား စာအုပ်တစ်အုပ်လိုပဲ။ ဘ၀မှာ ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာက ရေးထားနှင့်ပြီးသား။”
“ဘ၀ဆိုတာက ဇာတ်ဆရာ အလိုကျ ကရတဲ့ ရုပ်သေးတစ်ရုပ်လိုပါပဲ။”
“ဘ၀ဆိုတာက လောင်းကစားပွဲတစ်ခုလိုပဲ… ထွက်ချင်တဲ့ ဂဏန်းထွက် မှာပဲ။ ထွက်လာတော့မှ ဟိုဟာ… ဒီဟာ အကြောင်းပြ ကြရတာ။”
“ဘ၀မှာ ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်, ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ် ဘုရားသခင် အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်ရတာပဲလို့ ဖြေသိမ့်ရတယ်။”
“အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ မ,လို့သာ ဖြစ်ရမယ်။ ထင်တောင် မထင်ထားဘူး။”
“မင်းဟာ မင်းဘယ်လောက် လုပ်လုပ်… သူဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ။ ဘာမှ အစိုးရတာမှ မဟုတ်ဘူး။”
“ရောဂါတစ်ခုရလာရင် လူကြားထဲ ထုတ်ပြောရမှာ ရှက်ပါတယ်။ ကိုယ်အတိတ်က ဘယ်လို မကောင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အထုပ်ဖြေပြသလို ဖြစ်နေလို့။”
“သေနေ့စေ့နေတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ဆေးတွေကုကု၊ ယတြာတွေလုပ်လုပ်၊ ဘယ်ရပါ့မလဲ။”
“သူ့ဆန်စားမှတော့ ရဲရတော့မပေါ့။ ကျုပ်က လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။”
“ခေတ်ကြီးကိုက ဆုတ်ကပ်။ လုပ်နေလို့ကော ဘာများ အကျိုးထူးဦးမှာလဲ။”
“ဒင်းတို့ ဒီလောက် ဘုရားတရားသံဃာ စော်ကားနေတာတောင်… မိုးကြိုးက မပစ်နိုင်ဘူး။ ကြီးပွားရင်းသာ ကြီးပွား နေကြတယ်။”
“ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်ဆိုတာက ပညတ်ချက်တွေ။ လူဘ၀ဆိုတာက တိုတိုလေး၊ နေရတုန်းပျော်အောင်သာနေ။”
မကြာခဏ ပြောဖူးနေကြ၊ ကြားဖူးနေကြ စကားများပင် ဖြစ်မည်။ ဒဿနဆရာတစ်ဦး မဟုတ်သော်လည်း ဖြစ်ရပ်များ၏ အကြောင်းရင်းများကို စဉ်းစားဖူးကြပေလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်များတွင် “ဘာလုပ်သင့်သလဲ”ဟူသော မေးခွန်း၏ အဖြေတို့ ပါဝင်နေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် “ဘာလုပ်သင့်သည်” ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်မရနိုင်လောက်အောင် တွေဝေမှုများ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ ဤစကားအများစုတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပြောလေ့ရှိသော စကားများလည်း ပါဝင်သည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်အရ မည်သည့် အတိုင်းအတာအထိ မှန်ကန်ပါသနည်း… ။ အမြင်မှန်ကန်ခြင်းအား သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုခေါ်သည်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အဆင့်ဆင့် ရှိသည့်အနက် အခြေခံ အကျဆုံးဖြစ်သော ကမ္မဿကတ သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြင့်ပင် ထိုမေးခွန်းတို့၏ အဖြေကို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
‘ကမ္မ’ သည် အကောင်းအဆိုးများအား ပြုလုပ်ခြင်း၊ ‘သက’သည် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကမ္မဿကတအမြင်သည် “မိမိတို့ပြုလုပ်သော အမှုများအား မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သည်” ဟူသော အမြင်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုလျှင် မိမိတို့၏ အပြုအမူများအပေါ် ‘တာဝန်ယူစိတ်ရှိခြင်း’ ပင်ဖြစ်သည်။ လောကတွင် တာဝန်ရှောင်သော အမြင်များ၊ အတွေးအခေါ်များက ထုနှင့်ထေး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော တာဝန်ရှောင်သည့် အမြင်များ လွှမ်းမိုးလာပါက၊ ထိုအမြင်များအား နှစ်သက်စွဲလမ်းနေကြပါက “မိမိတို့ လုပ်သင့်သည်တို့အား လုပ်ဆောင်ရန်၊ မလုပ်သင့်သည်တို့အား မလုပ်ရန်အတွက် ဆန္ဒနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်။ လုပ်သင့်, မလုပ်သင့်ကိုလည်း မှန်ကန်စွာ မသိမြင်၍၊ သတိထား စောင့်ထိန်းခြင်းလည်း ပြုမည် မဟုတ်တော့။” ထို့ကြောင့် ဤသို့ တာဝန်ရှောင်သော အယူဝါဒများအား ငြင်းပယ်ရမည်ဟု ဗုဒ္ဓ၀ါဒက ခံယူသည်။
Labels: ကမ္မဿကတ, ဓမ္မမှတ်စု, ဧရာ
တိုတိုနဲ့ ထိမိပါပေတယ် ကိုဧရာ။ ရှင်းကနဲ၊ ကွင်းကနဲ ပဲ။
>>>‘ကမ္မ’ သည် အကောင်းအဆိုးများအား ပြုလုပ်ခြင်း၊ ‘သက’သည် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကမ္မဿကတအမြင်သည် “မိမိတို့ပြုလုပ်သော အမှုများအား မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သည်” ဟူသော အမြင်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုလျှင် မိမိတို့၏ အပြုအမူများအပေါ် ‘တာဝန်ယူစိတ်ရှိခြင်း’ ပင်ဖြစ်သည်။ <<<ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း ဆိုတာနဲ့ ၀ာာဝန်ယူစိတ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ကျနော်တခါမှ ဆက်စပ်ပြီး မတွေးမိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ဒက်ကနဲ ပဲ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ post လေးတစ်ခုကို ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
“တာဝန်” သိခြင်းဟာ ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားတဲ့ လူသားတို့ ရဲ့ လက်စွဲတရားတစ်ခုဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
I not agreed the blue print with italic " " sentences.
But I fully recommend the followed words, sentences and paragraph.
‘ကမ္မ’ သည် အကောင်းအဆိုးများအား ပြုလုပ်ခြင်း၊ ‘သက’သည် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကမ္မဿကတအမြင်သည် “မိမိတို့ပြုလုပ်သော အမှုများအား မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သည်” ဟူသော အမြင်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုလျှင် မိမိတို့၏ အပြုအမူများအပေါ် ‘တာဝန်ယူစိတ်ရှိခြင်း’ ပင်ဖြစ်သည်။
It is so clear for me.
But I fully accepted and recommend the following words, sentences and paragraph.